Sida Loo Qoro Qormo Wanaagsan oo loogu talagalay Jaamacadda 2022
September 14, 2021 Okpara Francis
Qorista curis waa sahlan tahay. Sax? Waa hagaag, wax badan maahan. Qoraalka jaamacaddu wuxuu leeyahay heerar aad u sarreeya oo mararka qaarkood ay adag tahay in la gaaro, oo leh dhammaan cadaadiska iyo cabsida dib u dhaca, fahamka meesha laga bilaabayo waxay noqon kartaa hawl culus. Waxaan haynaa tilmaamo yar oo kaa caawinaya inaad si fiican u qorto waraaqahaaga jaamacadda haddii aad dibadda wax ku baratid.
Marka, waa inaad u qortaa qormo dhab ah meel xoq ah oo loogu talagalay borofisarkaaga adag, waxaadna dareemi kartaa cabsi marka xitaa laga fikiro. Ha argagaxin.
Caadiyan, marka ardaydu arkaan tilmaamaha warqadda, waxay dareemaan cadaadis ah inay isla markiiba fikiraan oo ay ku lumeen liiska dheer ee shuruudaha. Ha yeelin sidaas; si tartiib ah u bilow. Dul mari bogga tilmaamaha oo dhan ama bogagga oo hel faham guud oo ku saabsan inta wakhti ee aad u baahan karto si aad u fahanto waxa socda.
Haddii aad u baahan tahay waqti badan, tag oo qaado koob bun ah. Marka hore, baro fikradda ugu weyn ee warqadda. Immisa bog ayee tahay inaad qorto? Maxaad samaynaysaa? Professor -ku ma rabaa inaad ka dhaadhiciso, milicsato, falanqayso, soo koobto, ama soo bandhigto macluumaad?
Ka dib markaad hesho fikradda ugu weyn, waxaad ku quusin kartaa faahfaahinta. Ha welwelin oo ka fikir iyada oo aan caadifad lahayn; ahaado ujeedo. Markaad maskaxda ku hayso sawirka oo dhan, waxaad dareemi doontaa raaxo badan fikirka.
La tasho macalimiintaada
La -taliyahaaga ayaa ku siin kara kaalmadaada haddii ay kuu harsan yihiin su'aalo. Barahaagu waa khabiirka hormuudka u ah kulliyadda ee aad aamini karto, si aad iyaga ula xiriirto si ay kaaga caawiyaan. Ha weydiin su'aalaha sida, "Maxaan sameeyaa?" ama, “Sida loo qoro curinta?”. Weydii su'aalo xariif ah oo gaar ah hana ka labalabeyn inaad qirto inaadan wax aqoon.
Haddii aad go'aansatay inaad qorto warqad, dhiirigeli oo soo ururi macluumaadka aad u baahan tahay si aad u hesho fikrad ah waxa aad samaynayso. Weydii asxaabtaada ama macalimiinta jaamacadaha inay kula wadaagaan muunado wanaagsan, ama ka raadi onleenka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira halis ah inaad hesho wax ka hooseeya tayada sare.
Haddii aad weli dareemeyso inaad ku dheggan tahay, waxaad ka dalban kartaa warqad shaqsiyeed adeegga qoraalka xirfadda leh, sida CustomWritings si aad u socodsiiso “ii qor qormooyin”Codsi. Adeegyada qorista tacliimeed ee noocan ahi waxay taageero waxbarasho siiyaan ardayda UK, USA, iyo waddamada kale ee Ingiriiska ku hadla.
Shirkado badan ayaa bixiya adeegyo qoraal oo caado ah waxayna leeyihiin waayo -aragnimo weyn oo la shaqaynta macaamiisha kala duwan. Waxay aad ugu farxi doonaan inay kaa caawiyaan inaad iibsato meeleyn tusaale ahaan aad la tashan karto.
Qormadaha badankoodu waxay bilaabaan inay ka nixiyaan ardayda marka ay timaaddo qaabeynta shaqada. Haddii aadan wax fikrad ah ka haysan qaab -dhismeedka shaqada, qaybtan ayaa ku caawin doonta.
Qormo kasta waxay ka kooban tahay hordhac, cutubyada jirka, iyo gabagabada. Hordhaca iyo gunaanadku ma aha inay aad u dheeraadaan: qiyaastii 10% warqaddu waa caadi. Xeerka dahabiga ahi waa inuu hal cutub u hibeeyo hal mawduuc. Habkan, qoraalkaagu si fiican buu u habaysan doonaa. Kaliya qaado warqad oo ku qor qoraal yar oo leh hordhac, gabagabo, iyo mowduucyo waaweyn oo aad rabto inaad ka hadasho.
Qaab dhismeedka baaragaraafka
Tilmaamahaagu waxay hore u sheegeen erayga tirinta erayga, si aad u tirin karto inta xog ee aad ku qortay cutub kasta. Soo saar tirada kalmadaha hordhaca iyo gunaanadka inta kalena u dhaaf cutubyada jirkaaga. Markaa, u kala qaybi tirinta erayga tirada qaybaha, waxaadna heli doontaa tirada qiyaasta ereyada ee cutub kasta si ay u ekaadaan kuwo siman.
Baaragaraaf kasta wuxuu leeyahay weedh mawduuc oo u sheegaysa akhristaha fikradeeda ugu weyn. Jumladaha xiga waa inay muujiyaan fikradda qoraaga oo ay taageeraan sheegashada.
Qoraalka qoraalka (thesis) waa mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan shaqadaada maxaa yeelay waxay ka jawaabtaa su’aasha uu qoray qoraagu. Si kastaba ha noqotee, qoraayaal badan ayaa runtii ku adag inay ka dhigaan mid ku kalifaysa. Qor bayaan tafsiir ah marka aad wax walba oo kaleba ku dhammaysatay.
Tusaale ahaan, haddii aad wax ka qoraysay kulaylka caalamiga ah, waxaad dhahdaa wax sidaas oo kale ah, “Sababaha ugu waaweyn ee kululaanshaha adduunku waa gubidda shidaalka fossil, tirada dadka, iyo beerashada.” Ha u qorin sidii adigoo kaliya ku jawaabi doona warqadda, in kastoo. Ku sii qoraalka.
Hordhac iyo gunaanad
Hordhaca waa inuu akhristahaaga u horseedaa dhibka aad damacsan tahay inaad soo bandhigto, gunaanadkuna wuxuu tilmaamayaa dooddii hore loo sameeyey waxayna u oggolaanaysaa akhristaha inuu fahmo sababta arrintani muhiim u tahay.
Caadi ahaan, ma hayaan xigashooyin ama macluumaad cusub. Si kastaba ha ahaatee, hordhacu wuxuu yeelan karaa jillaab si uu u qabsado dareenka akhristaha.
Taageeradu waa udub dhexaadka qoraalkaaga maxaa yeelay waxay ka dhigaysaa warqaddaada mid la isku hallayn karo oo la aamini karo. Qoraa kasta oo wanaagsani wuxuu ururiyaa macluumaadka ka hor inta uusan dood samayn. Waxa ugu xun ee aad samayn karto waa inaad abuurto ra'yi ku saabsan wax oo aad hesho eber caddayn. Marka, ku bilow raadinta macluumaadka onlaynka ama maktabadda jaamacadda.
Maqaallada dib loo eegay
Buugaagta ay daabacaan jaamacadaha ama ururada rasmiga ah
Shabakado leh aagag lagu kalsoonaan karo
Xusuusnow: had iyo jeer qormadaadu ha ahaato mid asal ah. Waxaad u adeegsan kartaa macluumaadka ilaha laakiin si kooban u sheeg oo soo xigso maaddada aan adiga ahayn. Waxaa jira shaqooyin badan oo cilmi-baaris oo dib-u-eegis lagu sameeyay oo ka socda internetka.
Aqoonyahan Google waa hal il oo inta badan loo isticmaalo helitaanka maqaallada joornaalka. Waxaad kaloo ku tiirsanaan kartaa ilaha lacag bixinta qaarkood, sida EBSCOhost, JSTOR, iyo Muse Muse. Haddii tilmaamahaagu kaa rabo inaad isticmaasho maktabadda jaamacadda, hubi inaad hesho dhammaan macluumaadka si aad u hesho.
Markaad dib -u -eegis ku qorayso warqaddaada, macallinkaagu wuxuu u badan yahay inuu xoogga saari doono luqadda. Waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya qaamuuska rasmiga ah iyo kan aan rasmiga ahayn, dad badan oo aan aqoon u lahayn qorista tacliinta ayaa sameeya khaladaad caadi ah. Haddaba, maxay yihiin aasaaska?
Ujeedo yeelo. Had iyo jeer noqo mid eex oo isku day inaadan saamayn ku yeelan dareenka akhristahaaga.
Ha isticmaalin foosha. Isticmaalka foosha ayaa caadi u ah qoritaanka aan rasmiga ahayn, laakiin qorista rasmiga ahi waxay u baahan tahay adeegsiga foomka buuxa ee erayadaada.
Luuqad aan eex lahayn. Ha isticmaalin ereyo muujinaya nooc kasta oo eex ah oo mar walba tixraac dadka aan lahayn luqad jinsi.
Ka fogow luuqada qiirada leh. Habka tacliimeed, qorayaasha intooda badani waxay isku dayaan inaysan u dhawaaqin dareen aad u badan, marka laga reebo qoraallada milicsiga.
Iska ilaali erayada aadka u fudud. In la fududeeyo dhawaaqyada oo aan rasmi ahayn, gaar ahaan ardayda jaamacadda.
Hadda diyaar baad tahay
Hadda waxaad taqaanaa sida loo qoro maqaallada ugu fiican oo si fiican loo fahmo waxaad samaynayso. Hubi inaad hore u sii qorsheysato oo aad isticmaasho liiskan fudud si aad ugu dareento raaxo badan qoraalka jaamacadda. Wax ku barashada dibedda fadlan xusuusnow: in badan oo aad qorto, ayay sii fiicnaanayaan qoraalladaadu.
Previous Post:Ma raacnaa habka saxda ah ee aan ku nasan karno waxbarashada? Haddii kale, fiiri halkan
Post Next:15 Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah oo Lacag La'aan ah Dadka Waaweyn